Sarai Peter Berling. Munyori we _Vana vechi grail_ vanofa | Zvazvino Zvinyorwa
Sarai Peter Berling. Munyori we _Vana vechidhori_ vanofa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Noticias, Novela
Mufananidzo (c) Getty Mifananidzo
Munyori wechiGerman uye mutambi, Peter achipopota, munyori ane mukurumbira we pentalogy akatanga ne Vana veGirairi, akashaya musi wa20 pa 83 makore. Mukurumbira neiyi nhevedzano yemanovel yakauya kwaari muma90s apo Berling anga atove nemakore makumi matanhatu. Zvaive futi audiovisual mugadziri uye muongorori wezvekudya.
Aive nehushingi hwekuburitsa iri 881-peji peji rakaiswa mukati Hondo dzehondo uye kuiburitsa muna 1991 kuGerman kuti ive zvinyorwa zvinoitika zveiyo genre genre. Nhasi Ndinoongorora basa rake semutero kumunhu wake.
3 Vana veGirairi
3.1 Iwo akateedzana mabhuku
4 Mamwe mazita
Berling Aive murume weterevhizheni uye cinema. Ndakanga ndashanda mu anopfuura mafirimu zana uye ne makuru avant-garde madhairekitori eGerman ema 70s se Fassbinder uye Herzog. Mukurumbira wechitendero wakarimwa uyo waigovaniswa nemabhuku. Aya ndiwo masviriro avakaita Vana veGirairi uye kubudirira kwacho kwaive kwakakura kwazvo zvekuti akazvipira nguva yakazara pazviri.
Berling Akaita nyeredzi mune dzinoverengeka zvigadzirwa zveGerman uye aivewo wechipiri mune mamwe akakosha. Pakati pemazita ake mazita Fitzcarraldo game Klaus Kinsky, Mhungu yakasvibira y Aguirre, hasha dzamwari zvakare neKinski uye pamwe nedhairekisheni ye de Werner Herzog. With Fassbinder Ini ndinoshanda mu Muchato waMaria BraunY. Uye zvakare ne Martin Scorsese, waakatora chikamu naye Muedzo wekupedzisira waKristu y Zvikwata zveNew York.
Muna 1986 akabatana mukugadzirwa kwemutungamiriri weFrance Jean-Jacques Annaud, kuti ndaizoenderana ne cinema Zita rerosi, Kubudirira kukuru kweItari Umberto Eco uye musuwo wekutanga mukuru uyo ​​wakavhurika kune yepakati medieval. Berling Aive mumwe wehama dzevamiriri veBenedictine inoenda kuAbbey yeCrime. Chiitiko ichocho neMiddle Ages chinofanira kunge chakamuratidzira kune rake rekupedzisira basa.
Yakakodzera nguva nguva yekuburitsa muenzaniso iyo yakasunga iyo kumuka kweyakagamuchirwa pasirese Mbiru dzenyika (kubva kuWales Ken Follett, rakabudiswa muna 1989) uye zvishoma zvisati zvaitika Iyo Da Vinci Kodhi (Dan Brown). Asi kukwidza kweMiddle Ages kuriko sezvo nyika yekunyora iri nyika yekunyora. Paive nemuenzaniso wakataurwa we Umberto Echo uye zvakare kubva kumusiki weHama Cadfael, munyori weBritish Ellis Peters. Uye zvirokwazvo tinogona kudzokera kune izvo zvinonzi medievalism zvinonakidza ye, semuenzaniso, Tolkien uye trilogy yake ye Ishe wemhete (1954).
Asi Berling akasarudza yekugadzira zvakasikwa zve dzinza reropa rakafanirwa kutonga uye kuburitsa magamba. Pakarepo, ivo protagonists vaive vasinga tsanangure matikitivha vachiburitsa zvakavanzika munzvimbo dziri kure, asi vaive Knights Templar, kugamuchira vaeni zvakanaka, Makathari, vaAassassins, mamwe mapato akavanzika kana enigmas akaputirwa munhoroondo yezvinhu. Vana ve grail inogona kuve yakarongedzwa kana kutaridzwa kubatana pakati peiyo nheyo yemashure, hobbits uye orcs yeTolkien uye yekupedzisira uye zvakaenzana pasirese chiitiko chave ikozvino Game yezvigaro uye izvo Rwiyo rwechando nemoto de George RR Martin, yakatanga muna 1996.
Vana ve grail taura nyaya yacho yehama mbiri neropa ramambo vanopatsanura nzira dzavo dzakakosha, asi vane tarisiro yehumwe humambo. Vaviri vakafamba vachipfuura nekuEurope vanopesvedzerwa zvakanyanya nechitendero, vakapinda muhondo uye vazere nerangano. Kubudirira mushure mekuburitswa kwayo kwakakurudzira Berling kuti arambe achinyora uye nekudaro akapedza mamwe mavhoriyamu mana. Mhedzisiro yacho ndeyekuti refu saga yezviitiko zvevateereri vese asi, panguva imwechete, nekubata kwevanotengesa zvakanyanya. Iyo inosanganisa iyo yenhoroondo uye yekunyengedza inoverengeka ine zvakadzama zvakadzama marongero nekutenda kune akawandisa magwaro.
Iwo akateedzana mabhuku
Ropa reMadzimambo, Korona yeNyika, Iyo Nhema Chalice uye maKelim ePrincess vanoumba mamwe mazita mana akateedzana, asi zvinowanzoitika, rinogara riri zita rekutanga rinowana kubwinya kwese.
Berling zvakare yakaburitswa Husiku hwaIesi, Bishop naSande wavo, Hondo yevana, Kuverengerwa kwevanyengeri kana iyo Knights yeiyo Tsvene Sepulcher. Iyo yekupedzisira inotsanangura hunyengeri uye masimba masimba akarwisa pamberi pehondo dzekutanga uye anorondedzera zviitiko zvakangoitika nguva pfupi yadarika Vana veGrial.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Sarai Peter Berling. Munyori we _Vana vechidhori_ vanofa
Lope de Vega. Makore makumi mashanu nemashanu mushure mekuzvarwa kwake. Mitsara makumi maviri uye mamwe mavhesi
Imwezve mitema kuverenga kuChishanu Chishanu. Kuumbwa uye nhau